Sina 1.5 mpamokatra vovo fandavahana ary mpamokatra | Shuangyang
Famerenana amin'ny laoniny ny Neurosurgery sy ny fanarenana azy, ny fanamboarana ny lesoka amin'ny cranial, manampy amin'ny famerenana ny filan'ny cranium salantsalany na lehibe, manamboatra visy amin'ny takelaka taolana.
Fitaovana: firaka titanium fitsaboana
• firaka titanium nafarana mba hahatratrarana ny hamafin'ny tsara indrindra sy ny fahafaha-manatsara indrindra
• Switzerland TONRNOS CNC mandeha ho azy fanapahana lathe
• dingana oksiasiôna tsy manam-paharoa, manatsara ny hamafin'ny tampon'ny visy ary mitafy fanoherana
mpamily volo loha: SW0.5 * 2.8 * 75mm
mahitsy mitambatra haingana tahony
Ny takelaka maivana ambany indrindra dia misy sisiny henjana sy profil mombamomba be dia be ary tsy misy fitanana. Hita amin'ny halavany namboarina kokoa.
Tombontsoa boribory firaka titanium ：
1. Hery lehibe. Ny hakitroky ny titanium dia 4,51g / cm higher, avo kokoa noho ny an'ny aluminium ary ambany noho ny vy, varahina ary nikela, saingy ny tanjaka dia avo lavitra noho ny an'ny metaly hafa. Ny visy vita amin'ny firaka titanium dia maivana sy mahery.
2. Ny fanoherana ny harafesina tsara, ny titanium ary ny firaka titanium amin'ny haino aman-jery maro dia miorina tsara, ny visy firaka titanium dia azo ampiharina amin'ny tontolo iainana mora simba.
3. Ny fanoherana ny hafanana tsara sy ny fanoherana ny hafanana ambany. Ny visy alimina titane dia afaka miasa amin'ny mari-pana hatramin'ny 600 ° C ary mihena 250 ° C, ary afaka mitazona ny endrik'izy ireo nefa tsy miova.
4. Tsy magnétique, tsy misy poizina.Titanium dia metaly tsy man magnetika ary tsy hotafihina amin'ny sahan'andriamby avo lenta.tsy vitan'ny tsy misy poizina, ary mifanentana tsara amin'ny vatan'olombelona.
5. Fampisehoana fanoherana mahery vaika. Ampitahaina amin'ny vy sy varahina, ny titanium dia manana fotoana fanitsiana lava indrindra aorian'ny fihovotrovotana mekanika sy ny hovitrovitra herinaratra. Ity fampisehoana ity dia azo ampiasaina ho forks for tuning, singa hovitrovitra amin'ny fikosoham-bary ultrasonika ary horonantsary fanamafisam-peo an'ny fanamafisam-peo nandroso .
Famolavolana kofehy ho an'ny fanombohana visy haingana sy torque fampidirana ambany. Safidy maro ny takelaka sy ny harato, ao anatin'izany ny mastoid sy meshes temporal, ary rakotra lavaka burr ho an'ny shunts.
Arakaraka ny henjana ny visy, ny tsara kokoa?
Ny visy dia matetika ampiasaina amin'ny fandidiana orthopedic mba hamehezana ny tranokala tapaka, hametahana ny lovia ho an'ny taolana, ary hametahana ny taolana amin'ny rafitra fametahana anatiny na ivelany. mpandidy.
Na izany aza, rehefa mihombo ny herin'ny herinaratra dia mahazo ny herin'ny tavy ambony indrindra (Tmax) ny visy, amin'izay dia mihena ny herin'ny tady amin'ny taolana ary sintonina lavitra kely izy. manolana ny visy amin'ny taolana. Matetika izy io dia ampiasaina ho toy ny masontsivana handrefesana ny hery mitazona ny visy. Amin'izao fotoana izao dia mbola tsy fantatra ny fifandraisana misy eo anelanelan'ny tselika farany ambony sy ny hery misintona.
Amin'ny klinika, matetika ny mpandidy orthopedika dia mampiditra ny visy amin'ny Tmax 86%. Na izany aza, Cleek et al. nahita fa ny fidirana volo Tmax 70% amin'ny tibia an'ny ondry dia mety hahatratra ny POS farafaharatsiny, manondro fa ny herin'ny torsion be loatra dia mety hampiasaina amin'ny klinika, izay hampihena ny fiorenan'ny fixation.
Fikarohana vao haingana momba ny humerus amin'ny vatan'olombelona nataon'i Tankard et al. dia hita fa ny POS faran'izay betsaka dia azo raisina amin'ny 50% Tmax. Ny antony lehibe mahatonga ny fahasamihafana eo amin'ny valiny etsy ambony dia mety ny tsy fitovizan'ny santionany ampiasaina sy ny fenitra fandrefesana samihafa.
Noho izany, Kyle M. Rose et al. avy any Etazonia dia nandrefesana ny fifandraisana misy eo amin'ny Tmax sy POS amin'ny alàlan'ny visy natsofoka tao anaty tibia an'ny vatan-drongony olombelona, ​​ary nandinika ihany koa ny fifandraisana misy eo amin'ny Tmax sy ny BMD ary ny hatevin'ny taolana kortika. ny POS faran'izay ambony sy mitovy dia azo raisina amin'ny 70% sy 90% Tmax miaraka amin'ny tselika visy, ary ny POS 90% Tmax vovo vilo dia lehibe lavitra noho ny an'ny 100% Tmax. Tsy misy fahasamihafana eo amin'ny BMD sy ny hatevin'ny kortika eo amin'ny tarika tibia, ary tsy misy ny fifandraisana misy eo amin'ny Tmax sy ireo roa etsy ambony. latsaky ny Tmax. Na dia 70% sy 90% Tmax aza dia afaka mahazo POS mitovy amin'izany, mbola misy tombony ihany koa amin'ny fanamafisana ny visy, fa ny tselika kosa dia tsy tokony hihoatra ny 90%, raha tsy izany dia hisy vokany eo amin'ny vokarin'ny fikandrana.
Loharano: Ny fifandraisana misy eo anelanelan'ny Torque Insertional sy ny tanjaky ny vatan'ny pullout. Teknika amin'ny orthopaedika: Jona 2016 - Boky 31 - Laharana 2 - p 137–139.
Teo aloha: endrika voninkazo titanium harato-3D anatomika
Manaraka: 2.0 visy fandavahana tena
Sarin'ny volo fandavahana tena
Volavolan-tsolika Titanium fandavahana tena
orthognathic 0,6 L lovia 6 loaka
lozam-pifamoivoizana miniillofacial trauma lovia kely anatomika
fanidiana lovia micro micro maxillofacial
fanidiana lovia tetezana kely mahitsy maxillofacial
fantsom-bozaka orthodontic fantsika 2.0 fandavahana tena ...